Idaacadii FM ta ahayd ee dhawrka bilood Hargeya laga dhegaysanjiray oo gacanta lagu soo dhigay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on November 17, 2014 by sdwo · No Comments
Ciidanka booliska ayaa caaawa gacanta ku soo dhigay idaacad FM ah oo xukuumada ka wareerisay oo mudo dhawr bilood ah si toos ah looga dhegaysanayey magaalada Hargeysa habeen kaste ilaa 11 habeenimo. Idaacadan ayaa xukuumadu ay si weyn uga hawlgashay sidii loo heli lahaa in la ogaado halka ay ku taalo ee ay wararka ka tebiso. Ciidanka booliska oo aad u habaysan ayaa galay gurigii ay ku taalay idaacadan FM ta ahi ka dib markii xogo hoose ay ku ogaadeen barta rasmiga ah ee ay wararkeeda ka baahiso.
Guriga idaacadan lagu qabtay ayaa ku yaala degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Wararkii uGu danbeeyayna waxay sheegayaan in idaacada gacanta lagu dhigay xili ay hawada ku jirtay iyadoo logu soo qabtay sedexdii weriye ee ka shaqaynayey.
Taliyaha booliska, Wasiirka arimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta ayaa la fiyaaa inay beri shirar jaraaid kaga hadlaan sidii iyo habkii loo soo helay idaacada iyo cid ka masuulka ah ee iidacadan dalka keentay kana hawlgelisay in si sharcidaro ay Hargeysa wararka uga dhexbaahiso.